कतै तपाईंका छोराछोरी डिप्रेसनमा त छैनन् ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् लक्षणहरू | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कतै तपाईंका छोराछोरी डिप्रेसनमा त छैनन् ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् लक्षणहरू
एजेन्सी । डिप्रेसनको शिकार युवा या वयस्क मात्र हुँदैनन्, यसले बच्चाबच्चीलाई पनि असर गर्न सक्छ ।
विशेष गरेर बच्चाहरू रिसाउने, झर्किने त सामान्य हो तर यदि बच्चाबच्चीहरू लामो समयसम्म चुप रहे भने केही न केही भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
बच्चाबच्चीहरूको यस्तो स्वाभावलाई अविभावकहरूले बिल्कुलै नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।
बच्चाबच्चीको स्वाभाव अध्ययन गरेर उनीहरूमा डिप्रेसन छ कि छैन भनेर जान्न सकिन्छ ।
विज्ञहरू बच्चामा डिप्रेसन हुने कारणहरू धेरै हुनसक्ने दाबी गरेका छन् । खराब स्वास्थ्य, जिन्दगीको समस्याहरू, पारिवारिक समस्या, आसपाको माहोल, आनुवंशिक या बायोकेमिकल डिस्टर्बेन्स लगायत धेरै कारणले बच्चामा डिप्रेसन हुन सक्छ ।
डिप्रेसन भएका बच्चाहरू सामाजिक दूरी बनाएर बस्न मन पराउछन् ।
बच्चाबच्चीमा हुने डिप्रेसनका लक्षणहरू
१) स्वभावमा गडबडी, धेरै रिस उठ्नु तथा दुखी भएर बस्नु
२) नीदमा अचानक बदलाव आउनु
३) कुनै पनि काम मन नलगाईकन गर्न चाहनु
५) एकाग्रतामा कमी र सामान्य गल्तीका लगि पनि आफूलाई दोषी देखाउने स्वाभाव
६) धेरै समय पेट र टाउको दुखेको गुनासो गरिरहनु
७) सामाजिक गतिविधिबाट दूरी बनाएर बस्नु
८) पटक पटक आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्न खोज्नु
भदौ ३ गते, २०७७ - २२:२८ मा प्रकाशित